मेगा बैंकको मनपरी– सीईओको सेटिङले बैंक डुब्ने खतरा - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
मेगा बैंकको मनपरी– सीईओको सेटिङले बैंक डुब्ने खतरा
बुधवार, पौष १५ २०७७
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भनेका पारदर्शी संस्थाहरुमा गनिन्छन् । अझ नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने भएकाले पनि बैंकहरुलाई सुरक्षित मानिन्छ । तर एउटा यस्तो बैंक, जसको मनपरी सुनिनसक्नुको छ ।
तपाईले सामान्य अर्थमा बुझ्नुस तपाईलाई जग्गा किन्नका लागि ऋण चाहिँयो बैंकले कति देला ? बैंकले तपाईको लिन चाहेको जग्गाको मूल्यांकन गर्छ र त्यसको ४० प्रतिशत बैंकले ऋण दिन्छ । बाँकी सबै रकम तपाई आफैले जुटाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात ल्याण्ड पर्चेज ऋण तपाईले ४० प्रतिशतमात्रै पाउनु हुन्छ ।
अन्य शिर्षकमा दिने कर्जाहरुमा पनि त्यस्तै हुन् । धितो जति छ त्यसको केहि प्रतिशत बैंकहरुले जोखिम मूल्यांकन गरेर लगानी गर्छन । जति धितो छ त त्यो भन्दा धेरै भने बैंकले लगानी नै गर्दैनन् । तर पहिलो महिला सीईओ भएको भन्दै प्रचारमा रमाएको मेगा बैंकले ऐन नियमको खिल्ली उडाएर निकै मनपरी गरेको छ ।
मेगा बैंकले ६० लाख रुपैयाँको मात्रै सम्पत्ति भएको एक कम्पनी धितोमा राखेर बैंकले ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ । बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेली र उच्च तहका केहि कर्मचारी मिलेर सेटिङमा २० लाख ऋण पाउन पनि नसक्ने कम्पनीलाई करोडौं ऋण लगानी गरिएको श्रोतको दावी छ ।
श्रोतका अनुसार सीईओकै सेटिङमा करोडौ ऋण लिन सफल ति व्यक्ति अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकी छिन् । हामीले यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाणहरु समेत फेला पारेका छौं । अपरादर्शीता र मनपरीका विरुद्ध हामी नियमित सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्दै जानेछौं ।
हेर्नुस् केहि प्रमाणहरु :
मेगा बैंककाे हालत खराब, अर्बौ ऋण जोखिममा
मेगा बैंकको अर्को काण्ड बाहिरियो, १२ दिनमा दुई पटक ऋण दिएर ३५ दिनको दौडधुप
# मेगा बैंक नेपाल
बुधवार, पौष १५ २०७७०८:५२:१९
डोल्पामा जिम्बु, भोटेजिराको लोभलाग्दो व्यापार
यसै बर्ष बलियो बन्दै महामारीले थलिएको विश्व अर्थतन्त्र
विकास निर्माणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइने छ: अर्थमन्त्री पौडेल
सुनको मुल्य घट्यो प्रतितोला कति ?
“ट्राफिक प्रहरीले चोरीको मोटरसाईकल सहित १ जना पक्राउ”